Ihe kacha mma nche maka gam akporo Wear | Gam akporosis
The kacha mma nche ihu maka gam akporo Wear
José Alfocea | | Ngwa gam akporo
N'otu ụzọ ahụ nke na-eme na gam akporo na smartphones na mbadamba, Android Wear pụtara, n'etiti akụkụ ndị ọzọ, maka ọkwa nke nhazi yana ọkachasị maka enwere ike ịhazi ihu elekere ya, nke a makwaara dị ka ihu nche ma ọ bụ ihu nche.
Ọ bụ ezie na nke a bụ obere customization na arụmọrụ okwu, hazie ihu elekere na-enye gị ohere elekere gị Gam akporo Wear anya n'ezie otú ị chọrọ, ihe bụrụ nke gị, bụrụ onye puru iche, nke pụrụ iche na iche na ndị ọzọ niiles Maka nke a, enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche, mana taa na Androidsis anyị ga-egosi gị ụfọdụ nke ihu nche kacha mma na-arụ ọrụ ma gam akporo Wear na Android Wear 2.0. Anyi ka anyi bido?
1 Black metal HD Watch Ihu
2 2Eche Anya Mara Mma
3 Wijetị igwe ojii afụ + eyi
4 Pujie Black Watch Ihu
5 Ihu Igwe Ihu
6 Lelee ihu - pere mpe ma mara mma
Black metal HD Watch Ihu
Ka anyị malite na otu n'ime ihe ndị mara mma nche ihu maka gam akporo Wear, Black metal HD Watch Ihu, ihu igwe zuru oke maka ndị na-agagharị agagharị. Na-enye a gbachapụrụ oji ọla dara, ma nwee ihe nhazi dị ka akụkụ nke atụmatụ "Nsogbu" ọhụrụ ewepụtara na Android Wear 2.0. Ya mere, ị nwere ike ịlele ọnọdụ batrị (ma ekwentị ma elekere), Google Fit, ọnọdụ ihu igwe ugbu a na ndị ọzọ.
Oge nche a nwere ihe niile ịchọrọ ma na-enye nnukwu arụmọrụ ọ bụ otu n'ime ngalaba kachasị mfe, mana ọ kachasị mma site na gam akporo Wear.
2Eche Anya Mara Mma
2Eche Anya Mara Mma es ihu nlele dị mfe, kwụ ọtọ, mana nke ahụ na-arụ ọrụ ya nke ọma. Ọ bụkwa Dabara na Nsogbu nke Android Wear 2.0 ka ị nwee ike ịhazi ihe iji nwee akụkụ mgbe niile dịka akụkụ elekere ma ọ bụ batrị ekwentị, ọnụọgụ Google Fit, akara elekere nkwụsị, oge na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Lelee anya ndị ọzọ na-eche nche nke RichFace mepụtara, ọtụtụ n'ime ha dakọtara na gam akporo Wear 2.0.
Wijetị igwe ojii afụ + eyi
Afụ Wijetị na Wea Launcher na-enye mmekọrịta ihu ọchị gam akporo Wear 2.0 zuru oke mmekọrịta. Ihu ọma ọ bụ ngwa nyocha nke na-aghọ ihu elekere nke elekere gị. N'ezie, ị ga - ahụ oge ahụ, mana ị ga - enwekwa ụzọ mkpirisi dị iche iche iji mepee ngwa ị na - eji ọtụtụ oge.
Ebe Apple Watch-style “gburugburu ígwé ojii” ngwa, kọntaktị, na ibe edokọbara na ulo meziri nke gị gam akporo Wee ekwentị ma ọ bụ na-ekiri.
Developer: Logix DYNA
Pujie Black Watch Ihu
Pujie Black Watch Face bụ ihu nche ọzọ maka gam akporo Wear ukwuu customizable ebe ọ bụ na-enye gị ngwaọrụ ndị dị mkpa ka ị nwee ike ịmepụta ihu elekere dabere na mmasị gị.
Ọ dakọtara na Android Wear 2.0 Complications, ma nwee ike ịrụ ọrụ dị ka onye na-ebido ngwa ngwa na ụzọ mkpirisi na ngwa ndị awụnyere na elekere gị.
Ọ nweghi ụdị nweere onwe ya iji nwalee ya, ị ga-akwụ ụgwọ euro 1,49, ọnụego elebara anya nke ukwuu na-atụle njirimara ya.
Lelee ihu - Pujie Black
Ihu Igwe Ihu
Ihu Igwe Ihu bụ ihe mbụ ngwa na na-enye gị ohere ịmepụta ihu elekere gị maka gam akporo Wear. Ngwa ahụ na-enye gị template na ụfọdụ ntuziaka ma site ebe ahụ, bido ịnwale na ịnwale. Ọ bụ eziokwu na ọ nwere usoro mmụta ụfọdụ, mana atụla ụjọ, ọ bụrụ na ike gwụ gị, ị nwere ike ibudata atụmatụ ndị ọrụ ndị ọzọ mere. Ugbu a nwere nhọrọ nke ihe karịrị 15.000 na-ekiri ihu, ọtụtụ n'ime ha bụ n'efu na ụfọdụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ.
Site n'ụzọ, ọ dakọtara na gam akporo Wear 2.0 yana nsogbu ndị ọhụrụ.
Lelee ihu - pere mpe ma mara mma
Anyị mechaa nhọrọ a nke ihu nche maka gam akporo Wear na Lelee ihu - pere mpe ma mara mma, dakọtara na gam akporo Wear 2.0 na nsogbu ya, ọ na-enye ihe karịrị elele anya elekere 20.000 yana nkwado maka ngwa akọwapụtara dịka Spotify, Pocket Casts na ndị ọzọ. Ọnụahịa dị na € 1,59, ọ bụ otu n'ime ngwa ntanetị kacha mma.
Lelee Ihu - Obere & Mara mma maka gam akporo Wear OS
Developer: EXtreme Studio
N'ezie enwere ọtụtụ ndị ọzọ na Storelọ Ahịa Play, ma akwụ ụgwọ na n'efu. Kedụ nke ị na-eji? Nke ọ bụla n'ime ndị a na ndepụta a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » The kacha mma nche ihu maka gam akporo Wear
Pujie Black na-ebibi batrị nke elekere ma mee ka ekwentị malitegharịa oge ọ bụla ma ọ bụ gbanyụọ onwe ya
Twitter Lite, nsụgharị ọkụ nke na-egosipụta iji data na nchekwa eme ihe
Nnwale ọsọ ọsọ: Samsung Galaxy S8 na LG G6